Bandhigyo cusub oo lagu soo bandhigay Malatya | RayHaber | raillynews
HometareenkaSoo bandhigida Trambus cusub ee cusub ee Malatya
11 / 04 / 2017 tareenka, GUUD, Nidaamyada Tire Wheels, Headline, TURKEY, baska tarooli
Waxyaabaha aan la kulmo oo aan TRAMBUS cusub helay Malatya hoose Malatya qalab Trambus ee kordhinta tirada codsiyada bixiya adeegyada markii ugu horeysay ee Turkey. Degmada Metropolitan, oo bilaabay inay la shaqeyso xambaarrada 2015 ee 12, waxay bixisay 5 faragelin dheeraad ah. Trambus 5 ayaa imaan doona bilaha soo socda. Adeegga cusub ee trambus ee u dhexeeyo MSTTI iyo Jaamacadda ayaa loo dhimi doonaa daqiiqado 5.
Tikidhada cusub ee iibsatay 5 waxaa lagu soo bandhigay saxaafadda iyo dadweynaha aagga ku yaal agagaarka Xarunta Adeega Metropolitan ee dhismaha.
11 April Tuesday at barmaamijka hordhaca qabtay 09.00 Customs iyo Wasiirka Ganacsiga Bülent TÜFENKÇİ, Guddoomiyaha AK Party xigeenka iyo ku xigeenka Çalık Malatya dirxiga, Duqa Malatya Ahmet Cakir, Xoghayaha Guud ee Ercan Turan, Guddoomiyaha Gobolka xisbiga AK ee Hakan Kahtalı maadama ay ku Guud Maareeyaha Ozgur Ozdemir, Madaxweynaha Yesilyurt degmada h.ug Polat, ESOB Madaxweynaha Shaukat fiiqan, ku xigeenka Xoghayaha guud, madaxdii waaxda, maamulayaasha laan, maamulaha guud ee shirkadda, ayaa ku biiray bulshada qaran nool xubnaha golaha.
Shirkadda 40 ayaa maalin waliba qaadi doonta rakaab
Hadal uu u sabab ah hordhaca ah ee Trambus Malatya Duqa Ahmet Cakir, trambü aad u baahan tahay in ay u safraan goobaha raaxo iyo ammaan, iyo sidoo kale, waxa uu sheegay in uu yahay nidaam gaadiid fiican ee degmooyinka kharashka hawlgalka hooseeyo. In 20 kun TRAMBUS in tirada beegsaday rakaabka, laakiin hadda Madaxweynuhu xusay in 34 kun oo rakaab gaaray Cakir, koobayaa yiri:
Waxaanu ka noqon doonnaa qaar ka mid ah werarrada leh baabuurta cusub iyo kordhinta tirada duulimaadka. 5 kasta waxay heli doontaa safar kasta oo safar kasta. Sidan oo kale, waxaan higsaneynaa inaan maalin waliba ku qaadno 40 kun rakaab ah. 10 km oo buuxa iyo 20 km masaafo bilaash ah ayaa la gaari karaa iyada oo aan loo baahnayn tamar leh trambus cusub oo leh nidaam batrool.
Hadafkayaga ugu muhiimsan waa inaan ka dhigno Trambus more ballaaran. Marxaladda koowaad, oo u dhaxaysa MAŞTİ iyo Jaamacadda, ayaa la dhammeystirey baabuurta aan hada iibsano. Taas ka dib, waxaan qorsheyneynaa inaan waddo ka furano agagaarka Aagga Dhex-dhexaadinta ka dibna laga bilaabo wadada Karakavak ama Koonfurta Belt. "
Caly: Waxaad ka tagtaa calaamadaha dawladaha hoose
Madaxweynaha Reer Tayyip Erdoğan ayaa loo doortay Duqa Magaalada Istanbul ee muddada 1994, sida qashinka qashinka ah ee Istanbul laga saaray, sida ay u arkeen dagaalka ka dhanka ah haraadka, Guddoomiye Ku Xigeenka AK-da iyo Ku-xigeenka Malatya Öznur Çalık ayaa sheegay ayaa sheegay in uu riixay xasuusta.
Çalık yiri, "Laakiin xilli degmada ayaa la bilaabay in dhammaan Turkey leh degmada Istanbul our Madaxweynaha. Degmada AK sannad 2002 ku jirin xadka on dhammaan adeegyada dalka Turkiga. Mid ka mid ah waa Muwaadinimadayada Muhiimka ah ee Degmada Malatya ee Ahmet Cakir iyo asxaabtiisa aadka u qiimeeya. Anigu waxaan leeyahay sharaf weyn oo aan ku haboonayn meesha aan tagno, qof walba wuxuu sameeyey adeegyo aad u fiican oo u qalma magaca horyaalka ee Malatya. Nooc, midab iyo waji ayaa isbeddelay 'ayuu yiri. TRAMBUS beddelo midabka ah ee laga Gaadiidka waa ugu horeysay ee Turkey. Madaxweynahayga ixtiraam leh ayaa sheegay in tiro yar oo gobollo ah ay hadda ka shaqeynayaan inay sidan sameeyaan. Waxaad ka tagtaa calaamadda maamulka deegaanka, caafimaadkaaga gacantaada. Degmooyinka magaalooyinka iyo degmooyinka degmooyinka ayaa ku faanaya shaqadayada. Waxaad qaadatay halis aad u culus si loo fududeeyo loona hagaajiyo gaadiidka. Madaxweynayagu wuxuu sheegayaa inaad halis gelin doonto, waxaad ku wareegi doontaa halis. Trambus sidoo kale wuxuu ahaa halis weyn. Waxaa lagaa cudurdaariyay cambaareyn aad u daran, laakiin waxay waydiinayaan sababta ay Trambus u imaanayso maanta. Ardaydeena jaamacadda waxay yiraahdeen kordhinta tirada Trambus. Tani waa tusaha ugu muhiimsan ee sida guul iyo muhim u ah shaqadaada. "
Calik hadalka sheegaya in ay u fidiyaan adeegyo aan xad lahayn ee degmada, ugu horrayn ka mid yihiin duqa magaalada Ahmet Cakir, mahadceliyay kooxda oo dhan ee degmada.
Tüfenkci: Heer sare oo ku qanacsanaanta Trambüs
Wasiirka Caddaaladda iyo Ganacsiga Bülent Tüfenkci ayaa hadalka ka jeediyay barnaamijka horumarinta. tayada degmooyinka iyo hoosta ka xariiqeen baahida loo qabo in ay curiyaan adeegyada dhaqaale Customs iyo Wasiirka Ganacsiga TÜFENKÇİ, Malatya degmada Metropolitan ayaa sheegay in ay u saxiixay adeeg weyn oo arrintan.
Tufenkci kooban; "Marka laga soo bilaabo barta aan gaarnay, waxaan arkeynaa in magaalada ay ku qanacsan tahay Trambuses ay tahay heerka ugu sareeya. Trambus waa guusha ayadoo la adeegsanayo qalab casri ah oo adeega qaranku adeegsanayo iyada oo aan loo baahnayn khayraadka. Iyada oo la isticmaalayo khayraad yar, daraasad lagu guulaystay ayaa la gaaray. Adeeggan wuxuu sidoo kale tagaa degmooyin kala duwan, adeegyada magaalooyinka si ay u qaadaan Malatya si ay u helaan dhibco kala duwan sidoo kale waa muhiim. Waxaan jeclaan lahaa inaan u mahadceliyo asxaabteena oo gacan ka gaystay inay gawaaridan u keenaan Malatya iyo Duqa Magaalada caasimadda kuwaas oo doonaya rabitaankooda howlgalka gawaaridan ee Malatya. Waxaan jeclaan lahaa maalmo aan shilal lahayn.
Kadib khudbadii, boodooyinka cusub ee la iibsaday waxaa lagu baarey ka qaybgalayaasha barnaamijka.
Imtixaanno loogu talagalay Trambus oo ku yaal Malatya (Sawir Sawir)
Tababbaraha Farsamada ee Cusub ee Cusub ee Lagu Helay Shaqaalaha Magaalooyinka Eskişehir
3 Maya Gaadiidka Waddada Waddooyinka
Qadka jidka tareenka dhulka hoostiisa ah waa in la sameeyaa
Buundada la xaday ayaa la bedelay
Maanta taariikhda: 12 April 1869 Van der Elst